The AirPods 3 na-enweta mmelite ọhụrụ | esi m na mac
AirPods 3 na-enweta mmelite ọhụrụ
Tony Cortes | | Ngwa
Anyị niile maara na Apple ngwaọrụ bụ ndị na-enweta ọtụtụ mmelite na njedebe nke afọ. Ọ bụ ezie na a priori ọ nwere ike ịdị ka ihe na-adịghị mma, ọ bụ nkwa ịmara na ụlọ ọrụ ahụ na-enwe nchegbu mgbe niile na ngwaọrụ anyị na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu yana ọganihu ọhụrụ nke etinyere na ụdị ngwanrọ ọ bụla nke ngwaọrụ ọ bụla.
Taa ọ bụ oge nke 3 AirPods. Anyị amaghị ozi mmelite ọhụrụ ahụ nwere ike iweta, ma ọ bụ na ọ bụ naanị mmezi nke mperi mpaghara. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na Apple amalitela ya, ọ kacha mma ka anyị melite AirPods 3 anyị ozugbo enwere ike.
Apple na-ele anya mgbe niile maka ịnye nchekwa na atụmatụ kachasị elu maka ngwaọrụ ya. Na nke a na-enweta ya na nkwụsịtụ mmelite nke software ha. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ihe na-adịghị mma nye ndị ọrụ, ọ bụ ihe akaebe na Apple na-ahụ mgbe niile na ha na-arụ ọrụ nke ọma.
Site na mgbagwoju anya na sistemụ macOS nwere ike ịnọchite anya Macs, ruo na firmware “dị mfe” nke ụfọdụ AirTags, ndị injinia sọftụwia Apple na-agbanwe mgbe niile, yana enwere ọtụtụ mmelite na njedebe nke afọ.
Taa ọ bụ oge nke atọ nke AirPods. Apple dị nnọọ wepụtara version 4C170 nke firmware gị. Dị ka ọ dị na mbụ, ụlọ ọrụ ahụ akọwaghị ihe ọhụrụ ọ na-eweta ma e jiri ya tụnyere ụdị nke gara aga, ma nke ahụ apụtaghị na ọ dịghịzi mkpa, nke ahụ bụ n'ezie.
Otu esi emelite ha
Dịkwa ka ọ dị na mbụ na ngwaọrụ ụfọdụ dị ka AirPods ma ọ bụ AirTags, Apple anaghị ekwe gị ike mmelite akwụkwọ ntuziaka nke AirPods gị na ụdị firmware ọhụrụ. Kama, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na a ga-etinye ụdị firmware ọhụrụ ahụ mgbe ejikọrọ AirPods site na Bluetooth na iPhone gị.
Naanị ihe ị nwere ike ime banyere ya bụ ịlele arụnyere mbipute na AirPods gị, ma hapụ ha ka ejikọtara ya na bluetooth na iPhone gị ka ha na-emelite onwe ha.
Iji mee nke a, mepee ngwa "Ntọala" na iPhone gị, wee nweta menu "Bluetooth". Chọta AirPods 3 gị na listi ngwaọrụ wee pịa "i" n'akụkụ ha. Lelee nọmba "ụdị" ahụ. Ụdị firmware ọhụrụ bụ nke 4C170.
Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị nke na-egosi na ihuenyo, ọ pụtara na emelitere AirPods gị kpamkpam. Ọ bụrụ na ị nwere nke dị ala, dị ka nke 4C165, tinye AirPods ka ọ kwụọ ụgwọ, ma mepee igbe iji jikọọ na iPhone. Mgbe nkeji ole na ole gachara, lelee nọmba mbipute ọzọ ma ị ga-ahụ na ha emeworị ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ngwa » AirPods 3 na-enweta mmelite ọhụrụ
Ịhọrọ Mac kacha mma maka kọleji
Apple enweelarị ihe ngwọta maka ahụhụ safari mana anyị ga-echere maka mmelite macOS